Mayelana nalesi Sithangami - Amaphakethe weBeroean - Ukubuyekezwa kweWebhu.org
Inhloso ye Amaphakethe we-Beroean - Ukubuyekezwa kweWebhu.org ukuhlinzekela indawo oFakazi BakaJehova abanezinhliziyo ezithembekile zokuhlangana ukuze bahlole zombili izimfundiso ezishicilelwe nezisakazwayo zeNhlangano ngokukhanya kweqiniso leBhayibheli.
I-NWT Bible isho lokhu:
“Qinisekani ngazo zonke izinto; bambelela kokuhle. ”(I-1Th 5: 20-21)
"Bathandekayo, maningakholelwa kuzo zonke izinkulumo eziphefumlelwe, kodwa zivivinyeni izinkulumo eziphefumulelwe ukubona ukuthi zivela kuNkulunkulu yini, ngoba baningi abaprofethi bamanga abaphumele ezweni."1Jo 4: 1)
Asiziphathi lezi zisho njengezeluleko ezinhle nje. Le yimiyalo. INkosi yethu isitshela ukuthi senze lokhu futhi siyalalela. Asifihli ngezaba ezingelona iqiniso zokuthi iNdikimba Ebusayo ibekwe uNkulunkulu, ngakho-ke kufanele siyilalele kube sengathi kukhulunywa nguJehova uqobo. Inkolelo enjalo, ngenkathi ishunyayelwa ngezincwadi zethu kanye nasendaweni yesikhulumi, ayitholakali eZwini likaNkulunkulu.
Yize kunjalo, inhloso yethu akukhona ukuthola amaphutha, kepha ukwambula iqiniso. Uma ngokuveza iqiniso, siveza namanga, khona-ke siyajabula ngoba ngokwenza lokho silingisa iNkosi yethu engazange ihlehle ekudaluleni izimfundiso zamanga nezilimazayo zabaholi bezenkolo balolu suku — abaholi benkolo, kufanele kuqashelwe, ongaphinda athi angaqokwa nguNkulunkulu.
Lesi siza sizungeza i- Isigaba Somphawuli we-Watchtower yesiza sethu sokuqala, Amaphakethe we-Beroean.
Kungani isiza esisha?
Sithole ukuthi lapho oFakazi beqala ukuvusa nokungabaza izinkolelo zabo, bavame ukuqala ngokuhlola izimfundiso ezihlokweni zamanje ze-Watchtower. Bangase bagoogle isihloko sendatshana yamanje yokufunda, engahle ibalethe lapha. Noma kunjalo, ukumane unikeze ukugxekwa okungokomBhalo kwezimfundiso ze-WT kuyisinyathelo sokuqala nje. Inkululeko yangempela yamaKrestu ivela ekuqondeni lonke iqiniso, futhi lokho kungumphumela womoya kaNkulunkulu osebenza enhliziyweni yomfundi. (John 16: 13)
Ngokuhlukanisa izindatshana eziphathelene nokuhlolwa okungokomBhalo ngokunemba kwemfundiso ye-Watchtower, sethemba ukuthi sizonikeza ithuba lokuqaqa iphuzu. Ezinye izingosi zethu zizohlinzeka ngocwaningo olujulile nokuqonda.